Gburugburu ụwa, tipping nwere ihe dị iche iche pụtara na omume, ọmụmaatụ: Ọ dị na South Africa chọrọ, dị ka ọ dị na USA. A na-atụ anya ka ị hapụ onu nke dị n'etiti 15 na 25% na America, and if you don’t you may very…
Ọ bụ nnọọ a maara nke ọma eziokwu na Europe bụ ihe kasị mma na-aga n'ihi àgwà cheese. Na dị ka a cheese n'anya, eleghị anya ị chọrọ ịmata nke bụ ihe kasị mma cheese Europe nwere na-enye na otú ahụ na ọ. Join us as we run through the…
The Best European restaurant Michelin ndu awade a oké mmalite ka na-eme atụmatụ a ụgbọ okporo ígwè eme njem gburugburu Europe. The Michelin ndu ugbu a na-enye European njem a nhọrọ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na hotels na 38 European obodo. Atọ ọhụrụ n'obodo e kwukwara na a 2019 mbipụta: Zagreb…
Ọ dịghị onye maara n'ezie n'ezie na akụkọ nke French fries na France. Anyị nwere ike ghara ọbụna-n'aka ma ọ bụrụ na ha na-abịa site na France, na niile. Chere, Kedu?! Yeap, ị nụrụ na o ziri ezi – ma Belgians na French kwuru nri a, and they both have stories to…
E nwere ihe na incredibly emezu banyere silently njuputa nke a ụgbọ okporo ígwè window, adịghị ị na-eche? Ya mere, ichefu banyere ihe nzuzo nche frisks, doro anya Ziplock akpa maka mmiri mmiri, efu nzuzo na ụlọ mposi-erughị busses. E nweghị ụzọ ka mma inyocha Europe karịa ụgbọ okporo ígwè na December. ebe a na-…
Nri dị ebube, karịsịa nri na-atọ ụtọ. Ọ bụ ya mere mfe ịbụ ekwe ihe ya mgbe bi na Europe na-enye gị nke ukwuu kpatara ya! The kasị mma obodo foodies nọ Europe, atụkwasị anyị obi anyị foodies nakwa, and so will you…